Waa maxay shukaansiga guul macnaheedu? Jawaabta su'aashani waxa ay ku xiran tahay aragtida aad nolosha iyo gool aad u dhigay naftaada marka shukaansi. Waxaa jira kuwa loo taariikhda lagu guuleysto oo keliya haddii ay tahay albaab u ah dhinaca xiriirka muddo dheer ah iyo xitaa guurka. Qaar kale waxaa laga yaabaa in ay tixgeliyaan musiibada haddii aysan aakhirka sariirta. Qaar ka mid ah, taariikhda lagu guuleysto haddii ay waqti wanaagsan. Inkastoo jirin wax hubaal ah in qodobadan soo socdaa taariikhda kasta beddeli doonaa qarax, Dhab ahaan waxay kaa caawin doontaa in aad yarayso heerka failure shukaansi aad.
La qabsi aad ka filayso in ay ujeedooyinka aad
Sida mashruuc kale oo kasta oo aad uga qayb galay, aad laga filayo qofka aad shukaansi ama laga bilaabo taariikhda laftiisa waa in lagu dabaqaa ujeedooyinkaaga. Haddii aad raadinayso hal habeen-taaganyihiin, ha fiirsado lamaanahaaga sida haddii aad socdeen si ay ku qaataan inta kale ee noloshaada isaga / iyada.
Samee xulashada musharaxiinta oo shukaansi aad
Haddii aad rabto in la kordhiyo tirada guusha, ma taariikhdana cid kasta oo u muuqata heli karaa. Ka go'ay liiska iman karta taariikhda oo dhan agtiisa kuwaad kula ballanteen aadan haysan wax caadi ah.
Taariikhda A ma aha fursad ay ku soo bandhigaan xirfadahaaga masraxyo. Sharciga dabiici ah, hana isku dayin in aad iska aad tahay wax kale ka badan aad xaqiiqdii tahay, gaar ahaan haddii aad raadinayso xiriir muddo dheer ah. Runta waxa ay ka soo bixi doonaan danbeyn iyo kii kale ayaa dareemi doontaa xanniban.
Ka dhig wax fudud
Taariikhaha ugu guulaha badan yihiin kuwa garaadka, kuwa aan joogtada ahayn. Haddii aysan ku ah taariikhda gebi ahaanba indhaha la 'ugu horeeyay, fikirto danahaaga caadi ah oo lala iman lahaa hawlaha qaar ka mid ah fikradaha ku jiheysan in racfaan laga yaabo in labadiinaba aad.
Fiiro gaar ah oo la joogo ka
Ha la soo dhaafay ka keeni wadahadalka si joogto ah hana ka Jeedsanina cabanayso xiriirka aad ku guuldareystay caado ah. Inkastoo ay muhiim tahay in labada la-hawlgalayaasha wadaagaan waxyaalo ku saabsan ay ka soo jeedaan, cidina ma doonayso in lala simo ex ah. Mustaqbalka waa mawduuc xasaasi ah oo si fiican u. Ha soo qaadaan haddii aad hubto in adiga iyo rafiiqa aad diyaar u yihiin sida mawduuc.
Fiiri aad ugu fiican
No arrinta waxa ay dadku sheegayaan, taariikh koowaad had iyo jeer ku saabsan yahay muuqaalka iyo aragti guud. Sidaa darteed, si waafaqsan naftaada diyaarin: saaray qaar ka samaysan, xirtaan wax ka eegayaa wanaagsan adiga iyo dhoola on. Si kastaba ha ahaatee, ha joojin qaadashada daryeelka naftaada marka aad u malaynaysid inaad tahay in xiriir.
Hayso aad cagaha dhulka ku
Macna ma laha inta weyn taariikhda u muuqataa, sii macquul. Ha ku boodaan sariirta ma, ugu yaraan aan maalinta ugu horeysa ee. Ha bilaabin hadleynaa arooska iyo caruurta oo kaliya sababtoo ah waxaad jeclaan movie isla.
Isku diyaari taariikhda
Taariikhda diyaarinta kuma jiraan oo keliya isagoo nadiif ah, uraya wanaagsan oo raadinaya smart. Haddii aadan la shukaansi muddo dheer, fikirto mawduucyo wada hadalka si aad uga hortagto khatarta ah ee aamuska sirgaxan dheer.
Tag ka baxsan kulan oo uu saftay
Just sababtoo ah dadku iska dhigaya inay yihiin smart, daacad iyo hal, taasi micnaheedu ma aha run ahaantii ay yihiin. Haddii aan ayey ahaayeen shakiyey walba iyo qof walba, isku day in aad soo saari out Beenaalayaasha ah iyo in ay soo ururiyaan macluumaad ku filan si ay u leedahay aragti shakhsi.
Ha ka badan-taariikh
Arrinta No sababta aad ku sugan tahay goobta shukaansi ah, ma quus iyo ka badbadin. Dating dadka aad la joogtaa ma loo kordhiyo fursadaha guusha aad. More, aad u ekaan doonto oo badan oo xiiso leh haddii aad leedahay qaar ka mid ah nolosha kale oo bulshada ka sokow shukaansi.
In socday taariikh koowaad, dabaal aad guuradii 10-sano, ama soo jeedinayaan guurka, Ubax waxay noqon kartaa hadiyad ugu fiican ...